» XOG: Sh.Shariif, Gaas & Cumar C/rashiid oo ku hishiiyay 6-qodob oo Halis ku ah Xasan sh…Badweyntimes.com
illo lagu kalsoon yahay ayaa inoo Xaqiijiyay in heshiis rasmi ah ay xalay gaareen Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas, Madaxweynihii hore ee dawladdii KMG ahayd Shariif Sheekh Axmed & Musharax Cumar Cabdirashiid, waxaana Hishiiskaasi goobjoog ka ahaa siyaasiin caan ah oo ay ka mid yihiin R/Wasaarahii hore Cabdi Faarax Saacid iyo Senator Cabdirisaaq Cismaan Xasan Jurille.
Sida Xogta ay sheegeyso Sheekh Shariif & Cumar C/rashiid ayaa ku hishiiyay in markale uusan soo laaban Xasan sheekh ayna qaadaan tilaabo kasta oo ay kaga hortagayaan.
Hadaba Sida Xogta sheegeyso Hishiiska Labada Dhinac ayaa ka koobnaa ilaa 6-qodob waxaana ka mid ah:
1-In Musharax Shariif Sheekh Axmed haddii uu ka gudbi waayo wareega koowaad uu codkiisa ugu shubo Musharax Cumar Cabdirashiid Sharmaake, Hadii Cumar C/rashiid uu harana uu codka Ugu Shubo Sheekh Shariif.
2-In haddii uu midkood guuleysto uu Ra’iisulwasaare ka dhigo qof ama midkood, taas oo ah qorshaha lagu dhisi karro dawlada Cusub.
3-In dhamaan lala dagaalamo kooxaha xagjirka ah iyo dawladdaha Shisheeye ee doonaya in ay faragalin ku sameeyaan doorashada.
4-In qodobada la xariira Hanaanka doorashadan lagu galayaa ay noqdaan kuwa cad-cad, gaar ahaana labada Musharax codadka ay haystaan.
5-In si wadajir ah ay ula kulmaan xildhibaano gaaraya 130 Xildhibaan oo hadda kusugan magaalada Muqdisho.
6-In Madaxweynaha Puntland, Raysalwasaare Saacid & Wakiilo ka kala socda Sharmaake iyo Shariif ay noqdaan kuwa mar kasta u taagan sidii taabo-gal looga dhigi lahaa qorshahan.
« Warbixinta Ka HoreysayAkhriso: Guddiga Doorashada oo Mar Kale Laalay Xildhibaan Shalay lagu doortay Kismaayo…
Warbixinta Xigto »Reer Muqdisho oo Laba Musharax u Saadaalinaya Xilka M/weyaha Balse Xasan sh, oo…